Fuula cancala Taatewwanii , maakiroo taatewwan muraasa unkaa keessatti argamanitti ramaduu dandeessisa.
Baafata halqaraa maalimaa bifa filatamee bani - cancalaUnka - Mudatoota fili
Kamshaa Unka Too'atamtootaa yookin Unkaa Saxaxa bani, Cancala Unkasajoo - Mudatoota fili
Mudatootni qaaqa Mudatootaa keessatti agarsiisaman kallattiin gulaalamuu hin danda'an. Furtuu Del dhiibuun mudata tarree keessaa haquu dandeessa.
TaateenDeebi'ee fe'amuu dura argaman unkaan deebi'ee fe'amuu dura. Qabiyyeen deetaa hanga ammattti hin haaromfamne.
Taateen Dogoggorra argame kaka'aa ta'a yoo weyta madda deetaa fayyadamnu dogoggorri argame. kun unkaawwan, sanduuqota tarree fi sanduuqota makaa fayyadama.
Taateen Gocha kuusaa boodaa argaman kuusaa ammeen sududaan jijjiirame booda.
Taateen Gocha kuusaa dura argaman kuusaa ammeen jijjiiramne dura. Fakkeenyaaf, maakiroon koronyate dhugoomina qaaqa keessaa eeguu danda'a.
Taateen Haqiinsa dhugoomsuu argaman akkuma deetaan unkaarraa haqameen. Fakkeenyaaf, maakiroon koronyate dhugoomina qaaqa keessaa eeguu danda'a.
Taateen Jijjiirraa kuusaa boodaargaman eega qareen kuusaa ammee sududaan jijjiramanii booda.
Taateen Osoo hinfe'amin argaman unkaan osoo hinfe'amin booda ; sunis, madda deetaa isaa irraa adda ba'a.
Taateen Osoo hinfe'amin dura argaman osoo unkaan hinfe'amin dura; sunis, madda deetaa isaa irraa adda ba'a.
Taateen Weyta fe'amu argaman eega unkaan sududaan fe'amee booda.
Taateen Weyta deebi'ee fe'amu argaman unkaan sududaan deebi'ee fe'ame booda. Qabiyyeen deetaa duruu haaromfame.
Taateen Dabarfamuun dura kan argaman unkaan deetaa ergamuun dura.
Taateen Jijjiiraa kuusaa dura argaman qareen kuusaa ammee jijjiiramin dura. Fakkeenyaa, maakiroon koronyate gocha kana "SOBA" deebisuun ittisuu danda'a.
Taateen Ulaagaalee guutuu argamanweyta unkaan fe'amuu deemu ulaagaalee guutamuu qaban. Fakkeenyaa, madda deetaa unkaa ajaja SQL asiin gadii ta'a:
IDDOO maqaa=:maqaa IRRAA * FILI
Asitti :maqaan ulaagaa weyta fe'amu guutamuu qabudha. Ulaagaan ofumaan unkaa maatii irraa guutama yoo danda'ame. Yoo ulaagaan kan hin guutamne ta'e, taateen kun ni waamama akkasumas maakiroon koronyate ulaagaa guutuu danda'a.